Debian + KDE: Fametrahana sy fanaingoana | Avy amin'ny Linux
Debian + KDE: Fametrahana sy fanaingoana
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Araka ny nampanantenako, eto dia tsikelikely ireo fihetsika nataoko raha vao nametraka aho KDE 4.6 amin'ny malalako Fitsapana i Debian. Somary sahirana aho androany, ka azafady raha tsy fenoina amin'ny antsipiriany araka ny itiavanao azy.
Androany maraina dia nanao fametrahana madio (avy tany am-boalohany) ny Debian, mba handefasana tsara kokoa ireo fonosana ilaiko hapetraka sy ny sisa, koa raha manaraka an'ity tsikelikely ity lahatsoratra ity ianao dia tsy hanana antony hananana olana.
1 Fametrahana Debian.
2 vaovao farany
3 Fametrahana KDE
4 Fonosana fanampiny.
5 Manamboatra an'i KDE
6 Fanesorana vokany.
7 Mampiseho fampiharana Gtk araka ny tokony ho izy
8 Fanesorana ny dingana amin'ny voalohany.
9 Fanesorana kodiarana elastika.
10 Birao mahazatra.
Mikasika ny fametrahana dia misy mampiavaka azy. Matetika aho mampiasa Fitsapana i Debian ary ny zavatra lojika indrindra dia izany Izaho dia nandefa iso an'ny Ity rohy ity ary miaraka amin'izany dia vitao ny fametrahana. Ny olana dia satria tsy avelan'ny bandwidth aho dia voatery nampiasa iso an'ny aho debian-squeeze.
Soso-kevitra # 1: Miezaka ny mametraka miaraka amin'ny iso Debian Testing iso noho ny antony roa:
Ho vitsy ny fonosana havaozina.
Tsy dia atahorana loatra ny mahita ny lesoka fiankinan-doha na zavatra toa izany.
Fametrahana, na amin'ny iso de manenjika o wheezy, mitovy tanteraka amin'ny fanazavako azy io ato amin'ity pdf ity, raha tsy hoe tsy mametraka aho Graphic Environment, fa ny Fitaovan'ny rafitra mahazatra. Ho an'ity toro-lalana ity dia heveriko fa ny fametrahana dia vita avy amin'ny iso of Testing.
Vantany vao vita ny fametrahana tsy misy tontolon'ny sary dia miditra ho faka ary manamboatra ny toerana fitahirizana:
ao amin'ny rakitra loharano napetrakay:
Rehefa vita dia havaozinay ireo fonosana efa napetraka:
Raha vantany vao vita io dingana io, raha mandeha tsara ny zava-drehetra, dia averinay indray ilay PC ary manohy mametraka izahay KDE.
Amin'ity toro-lalana ity dia hametraka ireo fonosana ilaina fotsiny izahay mba KDE aseho tsara ary afaka mampiasa azy. Hametraka fonosana ilaina ihany koa izahay izay tsy tafiditra ao anaty default. Raha vantany vao miditra ho faka isika dia hanana tontolo iainana miasa tanteraka amin'ny alàlan'ny fametrahana ireto fonosana manaraka ireto:
Ity dia ampy ka raha vao vita izany ary manomboka indray isika dia afaka miditra amin'ny birao vaovao misy antsika. Raha mijery ny farany ianao dia nanampy LightDM ary azavaiko ny antony. Rehefa mametraka ny fonosana izahay kde-plasma-birao, mametraka antsika ity KDM izay amiko dia mavesatra be, ka soloiko amin'ny LightDM. Raha vao manome isika Midira, hanontany anay ny mpamosavy hoe iza no tianay hampiasaina, ianao no mifidy izay tianao.
LightDM hametraka ireo fonosana ho an'ny mpizara sary koa izy. Satria mampiasa intel aho dia manampy fotsiny hoe: xserver-xorg-video-intel, toy izao:
Ampy izay, fa raha tiantsika ny hametraka raha vao vita, na miaraka amin'ireto, ireto fonosana manaraka ireto:
Fonosana hanatsarana ny rindranasa ireo gtk izay ampiasainay sy ireo sary masina ampianay. Raha tsy mampiasa ilay poketra ianao KDE raha hitantana ny teny miafinao dia azonao esorina kwalletmanager.
Alohan'ny hamerenana amin'ny laoniny dia tsara ny mametraka fonosana hafa ilaintsika, ohatra:
Kitapo mifandraika amin'ny audio / horonan-tsary
Kitapo mifandraika amin'ny rafitra ilaina amin'ny rafitra:
Fampiharana TSY / KDE ampiasaiko:
Mazava ho azy fa tokony hanampy na esory izay ilainao 😀
Manamboatra an'i KDE
Raha mandalo ireo dingana teo aloha isika nefa tsy nisy olana dia tonga amin'ilay ampahany mahaliana indrindra amin'ity zavatra ity isika: ny fanaingoana KDE hamonjy anay vitsivitsy Mb ny fanjifana. Voalohany dia hataontsika amin'ny tanana (amin'ny console) izany vao hiroso amin'ny lafiny sary.
Famonoana Akonadi + Nepomuk:
Tsy hiresaka amin'ny antsipiriany momba izany aho Akonadi o Nepomuk, indrindra satria misy lahatsoratra tena tsara izay mamaritra tsara ny fiasan'ny tsirairay amin'izy ireo. Azonao vakiana eto. Mba hanafoanana tanteraka an'i Akonadi dia manao izao manaraka izao izahay:
Izahay dia mitady ilay andalana milaza hoe:
ary namboarinay ho marina izany:
Tadidio fa toy ny fampiharana kmmail ampiasain'izy ireo Akonadi, ka mety tsy ho afaka hampiasa azy ireo isika. Mampiato Nepomuk amboary ny rakitra:
autostart = marina
Avelantsika toy izao:
autostart = diso
Amin'ny teôria dia azo atao izany amin'ny alàlan'ny Ny Préférences an'ny rafitra, fa tsy misy, haingana kokoa ny manodidina 😀
Afaka mamonjy loharanom-pahalalana kely isika amin'ny fanesorana ireo vokany (mangarahara, tetezamita) miditra izany KDE amin'ny alàlan'ny default. Noho izany dia manokatra ny Mpitantana Preferensi System » Fisehoana sy fitondran-tena amin'ny sehatr'asa »Desktop Effects ary esory » Alefaso ny effets an'ny birao.
Azontsika atao ihany koa ny manala ireo vokatra hafa amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fikirakira oxygen. Noho izany dia manindry izahay Alt + F2 ary manoratra izahay oksizenina. Tokony hahazo zavatra toy izao isika:
Any isika dia afaka miala voly amin'ny tenantsika manala ny vokatry ny karazany maro. Hamarino fotsiny aho: Ampandehano ny sarimiaina.
Mampiseho fampiharana Gtk araka ny tokony ho izy
Ny zavatra voalohany ataontsika dia ny fametrahana ireo motera gtk ilaina:
Manokatra terminal izahay avy eo ary mametraka:
Tsy mila misafidy afa-tsy amin'ny Torohevitra momba ny KDE noho ny amin'ny rindranasa gtk fampiasana QtCurve. Hita eto amiko ny vokany Firefox:
Fanesorana ny dingana amin'ny voalohany.
Manokatra ny Mpitantana Preferensi System »Fitantanana ny rafitra» Fanombohana sy fanakatonana »Mpitantana serivisy ary esorinay ireo tsy tianay atomboka. Ohatra iray izay tsy ekeko foana: Module fikarohana Nepomuk.
Fanesorana kodiarana elastika.
Na dia toa tsy toa izany aza, ny mitsambikina kely an'ny kisary izay miseho eo amin'ny bokotra rehefa manokatra rindranasa dia mandany loharano. Mba hanafoanana azy dia manokatra ny Mpitantana Preferensi System »Fisehoana sy fitondran-tena mahazatra» Fampandrenesana momba ny rindranasa sy fampiharana »Fandefasana fampandrenesana ary aiza no voalaza ao Kritika elastika napetrakay: Tsy misy kursor be atao.
Tiako foana ny manana ny birao nentim-paharazana, toy ny amin'ny GNOME o KDE 3. Ho an'ity dia mandeha amin'ny birao izahay ary tsindrio ny kisary eo amin'ny ilany ankavanana ambony ary misafidy Safidy fijerena lahatahiry:
Ary eo am-baravarankely izay mivoaka no ovaintsika ny toetra Fijery fijerena.
Mametraka rcconf izahay mba hanafoanana toy ny mahazatra daemon sasany izay manomboka rehefa manototra ny rafitra. Raha ny amiko dia iray amin'ireo hamafana ahy ny KDM hatramin'ny nampiasako LightDM. Mila mitandrina manokana amin'izany ianao, ary aza mamafa dbus.
Ary hatreto io torolàlana io. Manantena aho fa afaka manampy zavatra bebe kokoa rehefa mandeha ny fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Debian + KDE: Fametrahana sy fanaingoana
Misaotra elav nitandrina ny teninao +1
😀 Manantena aho fa tena manampy anao ...
mac_live dia hoy izy:
Misaotra, efa nanao ny fanaingoana aho, hiverina fotsiny isika hizaha raha tena mandeha haingana kokoa isika, ary inona ny programa azoko atao raha tsy amin'ny ora fanombohana? Raha tsy dia manelingelina anao loatra aho?
Mamaly amin'ny mac_live
Izany dia miankina amin'ny napetrakao. Raha asehonao ahy ny pikantsary dia mety afaka manampy anao aho .. 😉
hypersayan_x dia hoy izy:
Raha milaza ny zavatra akonadi aho dia averinao miamboho, mba hanafoanana ny akonadi dia tsy tokony ho diso ny variable, toy izao:
StartServer = diso
Mamaly an'i hipersayan_x
Eny, nitranga tamiko izany tamin'izaho nanoratra ilay lahatsoratra, misaotra betsaka 😀
elav Heveriko fa ny fampandehanana ahy akonadi dia ny mifanohitra amin'ny fomba nametrahanao azy tao amin'ny paositra.
Tamin'ny fanesorana ireo fitaovam-pitaterana sy famonoana an'i Akonadi sy Nepomuk dia nahenako 200Mb ny fanjifana, afa-po aho.
Fa manana RAM firy ianao? Nihena be ve ny fihinanana? Wow .. Mahafinaritra 😀
Manana 1.5Gb sy 1.3Gb aho miaraka amina processeur dual core AMD64, izay heveriko fa, rehefa mamaky amin'ny Internet aho, dia mandany RAM betsaka kokoa noho ny i386. Mikasa ny hanandrana mankany amin'ny 4Gb aho.
kik1n dia hoy izy:
Tsy niditra tao amiko mihitsy ny kde ahy noho ny fihinanana Ram be loatra.
Tiako izany fa ao amin'ny Gnome Ja aho
Valio amin'i kik1n
Miaraka amin'i Gnome2 aho dia miombon-kevitra aminao fa nanandrana ny Fedora 15 tamin'i Gnome3 aho ary manana fanjifàna RAM be dia be sahala amin'ny KDE, manantena aho fa hanatsara ny fanjifana amin'ny fivoarana.
roman77 dia hoy izy:
Tuto tena tsara… .ha, saika nitovy tamin'ny nametrahako an'i Debian… ny maha samy hafa azy dia tamin'ny fotoana nametrahako azy tamin'ny Squeeze ary loooong ny fizotrany 🙂
Valiny amin'ny Roman77
Misaotra Roman77, faly izahay fa tianao io 😀
Salama Elav. Na dia mbola tsy mpampiasa KDE aza aho dia hitako fa mahaliana tokoa ity fampianarana ity. Tiako ny mianatra. Misaotra betsaka ary manantena aho fa hanohy hamoaka bebe kokoa.
Misaotra Carlos-Xfce, manantena ihany koa aho ny hanohy hamoaka ny hafa, tiako holazaina, raha tsy miantso ahy i Gnome dia efa hitako fa misy fonosana Gnome3 misimisy miditra Testing 😀
arthur molina dia hoy izy:
Nahaliana ahy izany. Andao hojerentsika raha mamporisika ny hametraka azy aho amin'ny faran'ny herinandro. Salama.
Mamaly an'i arturo molina
MENA dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, amin'izao fotoana izao dia manomboka manaraka azy aho ... Te handrafitra ny kernel ho an'ny PC aho fa tsy fantatro izay modules hapetraka, manana Toshiba aho izay mampiasa AMD Thurion Dual core miaraka amin'ny RAM 4 GB ary ity ny vokatr'ilay lspci:
00: 00.0 Bridge tetezana: Advanced Micro Devices [AMD] RS880 Host Bridge
00: 01.0 tetezana PCI: Fitaovana Micro Advanced [AMD] RS780 / RS880 PCI mankany amin'ny tetezana PCI (int gfx)
00: 04.0 tetezana PCI: Fitaovana Micro Advanced [AMD] RS780 PCI hatramin'ny tetezana PCI (seranana PCIE 0)
00: 05.0 tetezana PCI: Fitaovana Micro Advanced [AMD] RS780 PCI hatramin'ny tetezana PCI (seranana PCIE 1)
00: 06.0 tetezana PCI: Fitaovana Micro Advanced [AMD] RS780 PCI hatramin'ny tetezana PCI (seranana PCIE 2)
00: 11.0 SATA Controller: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 SATA Controller [maody AHCI]
00: 14.2 Fitaovana audio: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
00: 14.3 tetezana ISA: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 LPC mpampiantrano mpanara-maso
00: 14.4 PCI tetezana: ATI Technologies Inc SBx00 PCI mankany PCI Bridge
00: 18.0 tetezana mpampiantrano: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00: 18.1 tetezana fampiantranoana: Advanced Micro Devices [AMD] Sarintany misy ny Prosesor an'ny fianakaviana 10h
00: 18.2 tetezana fampiantranoana: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processeur DRAM Controller
00: 18.3 tetezana fampiantranoana: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
00: 18.4 Tetezana mpampiantrano: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Link Control
01: 05.0 Controller mifanentana amin'ny VGA: ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200]
02: 00.0 Controller tambajotra: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8191SEvB Wireless LAN Controller (rev 10)
Valiny tamin'i Rojas
Dinika: Arch Linux vs Debian
Azo alaina ao amin'ny Firefox 8